မီးဘာကြောင့် မငြိမ်းသနည်း။ | Mandalaygazette's Weblog
Myanma News May 25, 2010 Comments: 6
မင်္ဂလာဈေးမီး ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြာကြာ လောင်ရသနည်း။
မီးသတ်ဝန်ထမ်းများကို အပြစ်မပြောလိုပါ။ သူ့တို့လည်း တစ်ရက် နှင့် တစ်ည တိတိ မအိပ်၊ မစားကြိုးစားပြီး ငြိမ်းသတ်ကြပါသည်။
ပစ္စည်းကိရိယာ မပြည့်စုံသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အထပ်မြင့်များသို့ လှေကားထောင်ပြီး ပက်နိုင်သော မီးသတ်ကား ၂ စီး၊ ၂ စီးသာရှိပါသည်။
ရေတစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာ ငြိမ်းသတ်ရပါသည်။ လောင်နေသော ပစ္စည်းများတွင် ဓါတုပစ္စည်းများ (ဆေးဆိုင်နှင့် အလှကုန်ဆိုင်) ပါဝင်နေမည်မှ သေချာပါသည်။ ဓါတုပစ္စည်းများလောင်ကျွမ်းပါက ငြိမ်းသတ်ရာတွင် သုံးသော ပစ္စည်းများ သုံးစရာမရှိပါ။
နောက်ဆုံးတော့ ဒီ ဘူတာ ပဲဆိုဒ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား မကောင်းသဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်ကြီး ဆောက်နိုင်သည်။ မီးဘေးအန္တရာယ်တားဆီးမည် လိုအပ်ချက်များကို မဖြည့်ပေးပါ။ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကို လှစ်လူ ရှုထားပါသည်။ ပညာရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို လှည့်မကြည့်ပါ။
လက်ပ်တော့ဈေးကွက် အနည်းငယ် ပြန်လှုပ်ရှားလာ →
6 thoughts on “မီးဘာကြောင့် မငြိမ်းသနည်း။”
Shwemannmay May 25, 2010 at 5:09 am Reply
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆိုတာ မြန်မာမှာ ခုနောက်ပိုင်းအတော် အသုံးများလာတဲ့စကားလုံးပဲ
Rain girl May 25, 2010 at 6:02 am Reply
ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ ကိုယ့်ဘ၀ အခြေအနေပေါ့။ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ လမ်းတွေ၊ စာကြည့်တိုက်တွေ များလာတောတော့သိပါ့။ 🙂
chitkoko May 25, 2010 at 7:21 am Reply
intro May 25, 2010 at 12:40 pm Reply
Who will help us? Ha ha… We only can help ourselves. 🙂
timothy May 25, 2010 at 12:57 pm Reply
Exactly. The failed state as it becomes increasingly obvious, Burma and its sad stories are real nightmare for our ancestors and independence fathers and mothers. If they were able to wake up in this century, they would have died with grave sadness ten times by looking at the great suffering of people under invading fascist army of Than Shwe. Than Shwe and Than Shwe alone have the responsibility for all the missing equipments to tackle the fire incidence here. The root cause of Burma becoming failed state is Fascist military regime.
rat May 25, 2010 at 3:23 pm Reply
ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ့်အိပ်ထဲကပိုက်ဆံထဲ့ပြီးမှ သူတို.နာမည် ( ကြံ့ဖွတ် ) နာမည်တွေလိုက်တပ်တာတော့နဲနဲမှမကောင်းပါ ။